တရုတ်မိုးလုံလေလုံအနုတ်လက္ခဏာ Wallboard ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်း | ရွှေတံဆိပ်
Wall Panel ကို
WPC ကြမ်းပြင် Panel ကို
SPC ကြမ်းခင်း Panel
မိုးလုံလေလုံ Decrative Wallboard
နိဒါန်းဝါးနှင့် wo ...
3D Wall Panel များအတွင်း ...
နိဒါန်း The Indoor WP ...
မိုးလုံလေလုံ Wall Panel ကို
မိတ်ဆက်ပလပ်စတစ်ဖွဲ့စည်းမှု Panelin ...
မိုးလုံလေလုံ Decrative ...
SPC နံရံကပ် Panel Panel ပစ္စည်းနိဒါန်း: SPC ...
SPC သည်သဘာဝကျောက်တုံးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်သန့်ရှင်းသောဗီနိုင်းကျောက်တုံးများကိုရည်ညွှန်းသည်။ SPC ကြမ်းခင်းကို PVC ဗဓေလသစ်၊ ကယ်လစီယမ်အမှုန့်နှင့်အခြားအရန်ပစ္စည်းများအားအသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲကော်နှင့်အခြားတ္ထုများအသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲပြုလုပ်ထားသည်။ နည်းပညာသည်အရောင်အသွေးစုံလင်သည့်အလွှာတစ်ခု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုခံနိုင်သောအလွှာနှင့် UR ဖြစ်သည်။
SPC နံရံ panel မှပစ္စည်းနိဒါန်း:
SPC panel - --- ပုံသဏ္,ာန်၊ အရောင်နှင့်မျက်နှာပြင်ကုသမှုတို့မှဒီဇိုင်းအတွက်လူသားဆန်စွာရွေးချယ်မှု၊ ချောမွေ့သောလိုင်းများ၊ ကြွယ်ဝသောအရောင်များနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောသဘာဝအာရုံခံသက်ရောက်မှုများရှိသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စစ်ဆေးရေးဌာနသည်ဆေးသုတ်ခြင်း၊ ပတ် ၀ န်းကျင်ကာကွယ်ခြင်း၊ မီးလျှံတားခြင်း၊ ရေစိုခံ၊ ပိုးဖလံ၊ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ခြင်း၊ ထုတ်ကုန်များ၏စီးရီးသည်အပူချိန်မြင့်မားသောရာသီများ၌သိသာထင်ရှားသည့်အပူလျှပ်ကာသက်ရောက်မှုများရှိပြီးအဆောက်အအုံ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသောအပူချိန်နိမ့်ရာသီများတွင်အပူပျံ့နှံ့ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိမှုသည်အဆောက်အအုံ၏အပြင်ပန်းအလှတရားကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီးကြီးမားသောအဆောက်အ ဦး များနှင့်အိမ်များ၏အပြင်ဘက်နံရံများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုကြသည်။ ခေတ်သစ်၏ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် Eco-သစ်မျက်နှာကျက်စီးရီးများသည်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်စတိုင်ဒီဇိုင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးမြို့ပြဖြစ်ထွန်းမှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေး၊ ဖက်ရှင်နှင့်စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးတို့ကိုတဖြည်းဖြည်း ဦး ဆောင်သည်။
SPC Wall Panel အင်္ဂါရပ်များ
SPC နံရံ panel ကို
PVC ဗဓေလသစ်အမှုန့်, ​​အလင်းကယ်လစီယမ်အမှုန့်နှင့်အခြားအရန်ပစ္စည်းများ
400mmx9mm; 600mmx9mm; 300mmx6mm; 400mmx8mm;
ဒီဇိုင်း ၂၀၀ ကျော် (စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောဒီဇိုင်းများ)
နံရံ & မျက်နှာကျက်ပြား
ရေစိမ်ခံသော; မီးဘေးကာကွယ်မှု၊ အစိုဓာတ်;
ကွေး ဝတ်ဆင် - ခံနိုင်ရည်; နေကာမျက်မှန်
စားသောက်ဆိုင်၊ ဟိုတယ်၊ စူပါမားကတ်၊
မီးဖိုချောင်၊ living ည့်ခန်းနှင့်စသည်တို့ဖြစ်သည်။
၁။ လျှပ်ကာတန်ဖိုးမြင့်မား။ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသည်။
2. တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူခြင်း, ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချ;
၃။ ပေါ့ပါးခြင်းနှင့်မာကျောခြင်း၊ ငလျင်လှုပ်ခြင်း၊
4. အပူနှင့်အသံ insulator တွင်လည်း & လောင်ကျွမ်းခြင်းနှောင့်နှေး
၅။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအလှဆင်ခြင်း၊ ဒီဇိုင်းပိုရွေးချယ်ခြင်း
Flat ပြားမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ပါ။ မညီမညာဖြစ်နေသောမျက်နှာပြင်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤထုတ်ကုန်ကိုအသုံးမပြုမီနံရံ၏အောက်ခြေကိုပြားပြားချရန်သစ်သားဘုတ်သို့မဟုတ်မီးဘေးကာကွယ်ရန်ဘုတ်ကိုအသုံးပြုသည်။
တစ်လောကလုံးကော် (ဥပမာ: GS27) ကိုစက်မှုအဆင့်နှစ်ဆနှစ်ဖက်တိပ်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။
၃ ~ ၅ မီလီမီတာ (ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မူတည်သည်)
စက်ရုံareaရိယာသည် ၁၂၀၀၀ စတုရန်းမီတာကျော်ရှိပြီးအပြည့်အဝအလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်သည့်လိုင်းများရှိသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ပထမဆုံးသစ်သားသစ်သားပလတ်စတစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့် R&D ခေါင်းဆောင်များအနေနှင့် Goldrain သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှစ၍ နိုင်ငံတော်၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးစစ်ဆေးမှုကိုနှစ်စဉ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ထုတ်လုပ်မှုကုန်ပစ္စည်းများ၏အထုပ်ကို PE အတွင်းပိုင်းထုပ်ပိုးမှုနှင့်မြှုပ်ထားသောထုပ်ပိုးမှုအလွှာသုံးလွှာတွင်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ အတွင်းအပြင်နှင့်ပြင်ပထုပ်ပိုးမှုများအားလုံးကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။
LCL သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်စိတ်ချရသည့်သစ်သားသေတ္တာများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။ ကုန်ကျစရိတ်များကိုသီးခြားတွက်ချက်ရန်လိုသည်။
ထုတ်လုပ်မှုကုန်ပစ္စည်းများ FCL တင်ပို့မှုအဖြစ်ကွန်တိန်နာသို့တိုက်ရိုက်တင်နိုင်ပါသည်။
ISO9001, အီး, SGS
500 မီတာအတွင်းပိုင်းမျက်နှာကျက်အလှဆင် panel ကို
အတွင်းပိုင်းမျက်နှာကျက်အလှဆင် panel ကို 50pcs / carton
ငွေပေးချေမှုပြီးနောက် 5-15 ရက်အတွင်းတင်ပို့
ရှေ့သို့ WPC စကိတ်ကြမ်းပြင်
နောက်တစ်ခု: SPC ပြည်ထဲရေးနံရံ Paneling
ကျောက်ခေတ်ပလပ်စတစ် Composite Paneling
SPC ကြမ်းခင်း Panel များ
3D Wall Panel များပေါင်းစည်းထားသည်